अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा देशलाई चिनाउन खेलकुदको महत्व छ: नेता नेपाल
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चिनाउन खेलकुद क्षेत्रको विशेष महत्व रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्नराज्य क्याम्पसले आयोजना गरेको रचनात्मक खेलकूद प्रतियोगिताका उत्कृष्ट खेलाडीलाई आज पुरस्कृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो — “मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चिनाउन नेपालले खेलकुदको विकास र विस्तारमा विशेष जोड दिनुपर्छ ।”
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले स्वस्थ्य जीवन र सामाजिक सद्भावका लागि पनि खेलकुदको आवश्यकता रहेकाले यसको व्यावसायिकताका लागि जोड दिनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद शाखाका निर्देशक गंगाबहादुर थापाले राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्नका लागि सरकारले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
कलेजका प्रमुख निर्मला सुवालले कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको चाप बढिरहेकाले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।
खेलकूद शिक्षक तथा भलिबलका राष्ट्रिय रेफ्री इन्दिरा निरौलाले विभिन्न खेलकूद विधामा २७८ जना विद्यार्थी उत्कृष्ट भएको जानकारी दिनुभयो । खेलकूद एक हजार ३०० विद्यार्थी सहभागी भएका थिए ।
नेयमार सम्भवत: दुई महिनाका लागि बाहिर
पेरिस (एजेन्सी) – पेरिस सेन्ट जर्मन (पिएसजी) का स्टार खेलाडी नेयमार चोटका कारण सम्भवत: दुई महिनाका लागि मैदान बाहिर हुने भएका छन् । नेयमार यहि साता मार्सेविरुद्धको खेलमा घाइते भएका थिए ।
नेयमारको एंकलमा चोटमा कारण उनलाई शल्यक्रिया चाहिने बताइएको छ । तर पिएसजी र ब्राजिल यस विषयमा विवादमा रहेको छ । पिएसजी अहिले नै नेयमारको शल्यक्रिया गर्न चाहँदैन किनभने मार्च ६ मा पिएसजीले च्याम्पियन्स लिगको महत्त्वपूर्ण खेलमा रियलको सामना गर्दै छ ।
अर्को तर्फ ब्राजिल भने नेयमारलाई विश्वकपको लागि फिट भएको देख्न चाहन्छ र तुरुन्तै शल्यक्रिया गर्ने पक्षमा रहेको छ । नेयमारले अहिले शल्यक्रिया गरे उनी दुई महिनाका लागि मैदान बाहिर हुने छन् । उनी सम्भवत: विश्वकपको एक महिना अघि फिट हुने छन् ।
घरेलु लिगमा पिएसजी सहज स्थितिमा रहेको छ । पिएसजी दोस्रो स्थानमा रहेको मोनाको भन्दा १४ अंकले अगाडि रहेको छ । च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा ३-१ ले पराजित भएको पिएसजी दोस्रो लेगमा नतिजा उल्टाउने होडमा रहेको छ । तर नेयमारको चोटले अब पिएसजीको पुनरागमन गर्ने आशा केहि कम भने पक्कै भएको छ ।
युएई नेपालसंग ५ विकेटले पराजित !!
युएईले १६० रन पुरा गर्यो !!
नेपाल र युएई बीच आज नेपाली समय दिउसोको ०१ : १५ बाट हुने भनिएको खेल मैदान चिसो भएको हुनाले टस हुन् ढिलो भयो । करिब डेड घण्टा पछि बल्ल टस हुन सकेकोछ जसमा युएईले टस जिती ब्याटिंग गर्न उत्रेकाछन् ।
अहिले सम्म युएईले ५ विकेटको क्षेतिमा २७ ओबर खेल्दै १६३ रन बनाउन सफल भएको छ । युएईले निरन्तर रुपमा आफ्नो रन रेट ६ भन्दा माथिनै राख्न सकेको छ, यो भने नेपालको लागि दुखको कुरा हो ।
नेपालका लागि पहिलो विकेट कुन कुन बलरले कति लिगे ?
ललित भण्डारीले मुस्तफालाई
पारस खड्काले गुलाम शाबरलाई
ललित राज्बंसिले रामिज शेहजाधलाई
ललित राज्बंसिले अहेमदलाई
नेपाल र युएईको म्याच चली रहदा उता अफगानिस्तान र वेस्ट इन्डिज अनि हंगकंग र नेदरल्याण्ड बीच हुदै गरेको म्याच भने बिचमै मौसन खराबीका कारण रोकिएको थियो र अहिले फेरी पूर्ण सुचारु भएको छ ।
पारस खड्काले लिगे विकेट !! युएई १५ औ ओबर खेल्दै २ विकेटको क्षेतिमा ७२ रन बनाउन सफल
टस जितेर ब्याटिंग रोजेको युएईले अहिले सम्म २ विकेटको क्षेतिमा १५ ओबर खेल्दै ७२ रन बटुल्न सफल भएको छ ।
भखरै मात्र पारस खड्काले गुलाम शाब्बरलाई आउट पार्न सफल भएका छन् भने ओबर सकिए लगतै १५ औ ओबर गर्नका लागि सन्दिप लामिछाने आएका छन् ।
मौसम खराब भएको हुनाले नेपालले युएईलाइ जति सक्यो कम रन रेटमै पहिलो इन्निंग सक्नु पर्ने हुन्छ ।मौसमले साथ नदिए D/L परिक्रिया पनि हुन् सक्ने हुनाले नेपाली बलरले कम भन्दा कम रनमै इन्निंग सकैदिनु पर्ने देखिन्छ ।
नेपालका लागि पहिलो विकेट ललित भण्डारीले मुस्तफालाई अनि गुलाम शब्बरलाई पारसले लिगेका छन्
युएईले नेपालमाथि ठुलो दबाब राख्दै, ! ललितले लिगे पहिलो विकेट
नेपाल र युएई बीच आज नेपाली समय दिउसोको ०१ : १५ बाट हुने भनिएको खेल मैदान चोसो भएको हुनाले टस हुन् ढिलो भयो । करिब डेड घण्टा पछि बल्ल टस हुन सकेकोछ जसमा युएईले टस जिती ब्याटिंग गर्न उत्रेकाछन् ।
म्याच सुरु भैसकेको छ । अहिले सम्म युएईले १ विकेटको क्षेतिमा १० ओबरमा ५४ रन बनाउन सफल भएको छ । युएईले निरन्तर रुपमा आफ्नो रन रेट ५ रन/ओबर भन्दा माथिनै राख्न सकेको छ, यो भने नेपालको लागि दुखको कुरा हो ।
नेपालका लागि पहिलो विकेट ललित भण्डारीले मुस्तफालाई ।